video Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Ciidamada DF ay bur buriyeen Xarumo Al Shabaab ku leeyihiin Jubbada Dhexe. – idalenews.com
Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Soomaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in Ciidamada gaarka ee Dowladda Soomaaliya ay weerar dhanka cirka ahaa ku qaadeen Xarumo tababar oo Xarakada Al Shabaab ay ku leeyihiin meel u dhow Magaalada Saakoow ee Gobolka Jubada Dhexe.
Bayaanka ayaa lagu xusay in Madaxweyne Farmaajo uu amray ama ogolaaday in la fuliyo weerarkaasi ka dhanka ah Al Shabaab, waxaana Ciidamada ay Weerarkooda ku beegsadeen goobo muhiim ah oo Al Shabaab ay hubka ku keydsadaan.
“Waxaan Saaka amray in duqeyn lagu beegsadi Xarumo tababar oo Xarakada Al Shabaab ay ku leeyihiin Degaano u dhow Magaalada Saakoow ee Gobolka Jubada Dhexe, waxuu ahaa Weerar loo fuliyay sidii loo qorsheeyay”, sidaasi ayaa lagu yiri bayaanka.
waxaa qoraalkan lagu shaaciyay in Madaxweynaha uu balan qaaday in ahmiyada 1-aad uu siinayo amniga markii ugu horeysay ee xafiiska uu la wareegayay, waxaana sidoo kale lagu sheegay in Weerarada nuucan ay wiiqayaan awooda iyo khatarta Al Shabaab, islamarkaana ay xoojinayaan xaqiijinta amaanka Dalka.
Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Al Shabaab in dhibaatooyin kala duwan ay shacab badan u geysteen, kuwaasi oo ku hoos noolaa, waxuuna tilmaamay in uu si gaar ah ula kulmay qaar ka mid ah Shacabkaasi, sida lagu xusay bayaanka ka soo baxay Xafiiska Madaxweyne Farmaajo.
Waxaa sidoo kale uu shaaciyay in ay ka go’an tahay ciribtirka Xoogaga Xarakada Al Shabaab oo weli ku xoogan qeybo ka mid ah Dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa markale ku celiyay in dhalinyarada ka dhinac Dagaalamaya Xarakada Al Shabaab loo baahan yahay in ay ka faa’deystaan fursada ama cafiska uu dhawaan u fidiyay Madaxweyne Farmaajo.
Ilaa iyo hada majiro wax hadal ama jawaab ah oo ka soo baxay Xarakada Al Shabaab oo ku aadan Warkaan ka soo yeeray Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya, kaasi oo ah in Ciidamada gaarka ee Soomaaliya ay duqeyn ku burburiyeen Xarumo ay Al Shabaab ku leeyihiin Degaano dhaca Magaalada Saakoow ee Gobolka Jubada Dhexe.